FBC - Sanada Sirreeffama Sagantaa Eksteenshinii Fayyaa irratti mariin geggeffame
Sanada Sirreeffama Sagantaa Eksteenshinii Fayyaa irratti mariin geggeffame
Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Sanada Sirreeffama Sagantaa Eksteenshinii Fayyaa irratti mariin geggeffame.
Waltajjii marii kana irratti qondaaltonni olaanoo , bakka-buutonni biiroolee fayyaa naannoo fi hojjattoonni eksteenshinii fayyaa hirmaataniiru.
Itti-aanaan Ministira Muummee Mootummaa Federaalaa Dimookraatawaa Itiyoophiyaa Obbo Dammaqaa Mokonniinis waltajjii sagantaa eksteenshinii fayyaa fooya’e irratti marii geggeessuuf qophaa’e kana irratti argamanii haasaa dhageessisaniiru.
Wayita kanas Sagantaan Eksteenshinii Fayyaa sadarkaa dinagdee fi mala jireenyaa hawaasichaa sadarkaa gituun fooya’uu akka qabu Itti-aanaan Ministira Muummee Obbo Dammaqaa Mokonnin himaniiru.
Itti-aanaan Ministira Muummee Dammaqaa Mokonnin sagantaan kun galma misoomaa bar-kumee biyyattiin milkeessiteef gahee olaanaa gumaachuusaa ibsaniiru.
Bu’aalee waggoota darbanitti galmaa’an keessaa: bara 1990n keessaa baay’inni haadholii sababa da’umsaan du’anii kuma 100 keessaa 1064 ture bara 2016tti 412 xiqqeessuun , akkasumas daa’imman kuma 1 keessaa 244 lubbuu isaanii dhabaa turan 67 hir’isuun danda’amuu ibsameera.
Sagantaan Eksteenshinii Fayyaa tajaajila fayyaa bu’uuraa biyyattii guddisuun bu’aa galmeessise kun garuu dagannaa uumuusaa itti-aanaan ministira muummee kun eeraniiru.
Kanaafis, sagantichi sadarkaa dinagdee fi mala jireenyaa hawaasichaa kan gitu ta’uu akka qabu Itti-aanaan Ministira Muummee Obbo Dammaqaan ibsaniiru. Haala kanaan, babal’achuu magaalotaa waliin wal-qabatee tatamsa’inni dhibeewwanii waan dabaluuf, sirni nyaataa wal-madaalawaa hin-taane waan jiraatuu fi waantonni araada nama qabsiisan waan babal’ataniif saganticha keessa deebi’anii sirreessuu barbaachisaa ta’ee argamuusaa eeraniiru.
Ministirri Eegumsa Fayyaa Doktar Amiir Amaan gamasaaniin hoggansi siyaasaa jijjiirama waggoota duraaniitti galmeessise waggoota sadan kanatti dabaluu hin-dandeenye jedhan. Dabalataanis, rakkoon bu’uura misoomaa hojii kellaawwan fayyaa jeequusaa ibsaniiru. Fakkeenyaaf, waajjiraaleen sektaraa ogeeyyiin eksteenshinii fayyaa hojilee isaan hin-ilaallanne dabalataa akka hojjatan godhaniiru; kunis, hojii idilee isaanii jeeqeera jedhaniiru. Kana malees, ogeeyyiin kunniin bu’aalee (incentives) fi carraacarraan barnootaa akka isaanii hin-kennamne komii akka qaban ibsaniiru.
Kanaan wal-qabatee, ogeeyyii kuma 18 sadarkaa afuraffaatti guddachuusaanii eeruun, fuul-durattis kanneen hafan ogeeyyii kuma 22 gara sadarkaa arfaffaa kanatti guddisuuf akka hojjatamu ibsaniiru. Bara 2012 jalqabees Ministeera Barnootaa waliin mari’achuun carraan itti-isaan yuunivarsitii seenanii itti baratan nimijeeffama jedhaniiru.
Sagantaan Eksteenshinii Fayyaa baadiyyaatti bara 1997, magaalaatti ammoo bara 2002 jalqabame; damicha keessaas ogeeyyii kuma 40 oltu jiru.
Oduuwwan Biroo « Manni-maree Ministirootaa IGAD Riik Maachaar waliin mari’ate	Muummee ministiraa Dr. Abiy hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf Ramadaanni kan tokkummaa fi jaalalaa akka ta’u hawwan »